Film soomaliya ka hadlayo oo lagu soo bandhigayo Stockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Film soomaliya ka hadlayo oo lagu soo bandhigayo Stockholm
La daabacay fredag 31 oktober 2014 kl 15.45
Film cuub oo ka hadlaya burcad badeeda soomaaliya iyo sababta kaliftey oo dhawaan Stockholm lagu soo bandhigayo.
Bandhiga filmada ee Stockholms Filmfestival oo arbaca (5 nov) ka billaabanaya SDtockholm ayaa lagu so bandhigi doonaan filmaan caalamka oo dhan ka yimid. Bandhigaan filmada ayaa ah fursad ay dadka kula socon karaan filmada caalamka oo caadiyan laga shidin shaneemooyinka Sweden, sida ay tiri madaxa bandhiga filmada Git Scheynius.
- Bandhigan ka sakow in ruuxa ku ogaado dhaqannada waddamada kale, sidoo kale waxaan qabaa in uu yahay daaqad caalamka intiisa kale lagala socon karo. Waxaan qabaa in bandhigan filmada yahay sida dhoof caalamka oo dhan lagu marayo, waxaad arki kartaa meelo badan oo aadan awel arki laheyn, ayey tiri.
Bandhiga Filmada Stockholms internationella filmfestival sannadka waxaa loo dabaal degayaa 25 guurdii ka soo wareegtey markii ugu horeysey oo la qabtay. Sidaas daraadeed waxaa sannadkan lagu soo bandhigi barnaamijkii bandhig ee ugu weynaa, 201 filmaan ka kalo socda 60 dalal oo kale gedisan ayaa todobaadka uu socda filmfstvalka lagu soo bandhigi doonaa, iyada 500 oo goor filmadan laga shidi doono 9 shaneemo oo kale gedsian. Martida xaflada bandhiga filmada ka soo qayb galaysa ayaa isku jir doono kuwo si weyn loo magac garanayo iyo kuwo aan sidaas loo aqoon. Uma Thurman ayaa ka mid ah marqtida la magac garanyao ee filmfestivalkan ka soo qayb galaysa iyo film sameeyaha weyn ee reer Ingiriis Mike Leigh, kaas oo la siin doono billad sharafeed isaga iyo film sameeyaha reer Sweden Roy Andersson.
Filmada bandhiga Stockholm international filmfestival lagu soo banddhigi doono waxaa ka mid ah Film ka hadlaya Soomaaliya kaass oo la yiraahdo ”Fishin Without nets”-filmakna oo ka qayb galaya tartanka festvalka soo qaban qaabiyey. Waxuuna ka hadlayaa kaluumasatada soomaaliya nolasha ku adkaatey ka dib markii kaluunkii ay doomo waaweyn badda ka dhameeyen, ka dibna ay go’aansadeen in ay faraha la galaan howlo burcad badeednimo.
Aaragtida filmka "Fishing without nets", ayaa ah mid ka duwan aragtida laga baahiyo burcad badeeda soomaalida sida ay leedahay madaxa festivalka Git Scheynius:
- Midda wanaagsan waxay tahay filmkan waxuu ka duulayaa aragtida burcadbadeed soomaalida, waana dhif in la arko film sidaan oo kale ah. Badanaa filmada waxay ka duulaan aragtida reer galbeedka , halka filmkan lagu soo qaadanayo aragtida soomaalida iyo waxa ku kalifay xaaladda burcad badeednimada,. Qogkii daawadaana markas wuu fahmayaa sababta ay sidaan u sameynayaan, ayey tiri.
Dhanka kale inkastoo xaaladda film soo saarayasha dalka Iraan ay aad 7u adag tahay hadana waddankas ayaa sannadyadan danbe soo saaray aad caan u noqday. Bandhiga filmada Stockholm sannadkanna waxaa lagu soo bandhiagi doonaa lix film oo ka yimid dalka Iraan. Mid ka mid ah filmadas waxaa la yiraahdaa ”Tales” waxaan sameeyey gabar la yiraahdo Rakhshan Banietemad. Laakiin rajimka dalkas ayaa ka hor istaagay in ay ka soo qayb gasho bandhigan filmada.
- Iraan qofka uma baahna ogalaansho sameynta filmo gaagaaban, sidaas daraaded waxays ameysey todobo film oo gaagaaban kuwaas oo ay hal film ka dhigtey, waana film aad iyo aad u wanaagsan oo ka hadlaya xaaladda nolal maalmeed ee magaalada Tehran iyo dalka Iraan, iyo sida qofka uu uga gudbi karo awoodaha shabka isha ku heysa ee hortaagan, ayey tiri.
Bandhiga Stockholms Filmfestival waxaa jira billado lagu qaybinayo. Filmka ugu wanaagsan ee laguy soo bandhigo goobtann ayaa la siinayaa billad la yiaahdo Bronshästen iyo weliba billado kale oo kala årets rising star oo micnaheeda yahay xigta sannadka, billadas oo la siinayao jilaaga soo bandhiga wax qabad fiican iyo karti jilaanimo.
Tan iyo sannadkii 2011 bandhigan Stockholm Filmfestival waxaa lagu bixinayey deeqo lagu sameeyo film, sannadkan waxaa xalaflada Filma ayaa lagu soo bandhigi doonaan markii ugu horeysey film lagu sameeyey deeq film.
- Film la yiraahdo ”Ung Sophie Bell” oo ay sameysey Amanda Adolfsson laguna sameeyey deeqda film ee Festivalka lana siiyey haweenka sameyaasha reer Sweden maadaama ay haweenka filmada sameeya aad ugu yaryahiin dlaka Sweden, waana Filmkiii labaad ee hadda la sii deynayo, ayey tiri madaxa bandhiga filmada Git Scheynius.
Stockholms Filmfestival waxuu billaabanayaa 5 november saconayaana illaa iyo 16ka november.